Wild (2014) | MM Movie Store
2014 ကတညျးကထှကျခဲ့တဲ့ Wild ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးဟာ American Biographical Adventure Drama ဇာတျကားအမြိုးအစားဖွဈပွီး၂၀၁၂တုနျးက Cheryl Strayed ရေးသားခဲ့တဲ့ Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail(PCT) ဆိုတဲ့ကိုယျတိုငျဖွဈရပျမှနျကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပျကိုအခွခေံရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ။
ဇာတျကားထဲမှာ Cheryl နဲ့ Bobbi အဖွဈသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Reese Witherspoon နဲ့ Laura Dern တို့ နှဈယောကျလုံးဟာလညျးအျောစကာဆုအတှကျ Best Actress နဲ့ Best Supporting Actress အဖွဈစကာတငျအရှေးခံခဲ့ရပွီး အခွားသောဆုတှမှောလညျး စကာတငျအရှေးခံရတာတှရှေိခဲ့ပါတယျ။
Rating တှအေနနေဲ့လညျး Rotten Tomatos မှာ 89%….IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျကားကောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ ဘဝမှာအခဈြရဆုံးအတှယျတာရဆုံး မိခငျဖွဈသူသဆေုံးသှားပွီးနောကျပူဆှေးသောကတှရေောကျပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျမထိနျးနိုငျမသိမျးနိုငျအောငျပကျြဆီးသှားပွီကိုယျ့အိမျထောငျရေးကိုပါဖကျြဆီးမိခဲ့တဲ့ Cheryl Strayed ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ….
ကိုယျလမျးမှားရောကျနတောကိုသတိထားမိပွီးနောကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျထူထောငျဖို့နဲ့ စိတျဓာတျတှပွေနျစုစညျးဖို့အတှကျဆိုပွီးအမရေိကနျနိုငျငံမှာအရှညျလြားဆုံးခရီးကွမျးရှညျ မိုငျပေါငျး၂၆၅၀အထိရှိတဲ့လမျးကွမျးကို လမျးလြှောကျခရီးနှငျဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။
အရငျက ဘာ Hiking အတှအေ့ကွုံမှလညျးမရှိတဲ့ Cheryl တဈယောကျ…ဆန်ဒတဈခုတညျးနဲ့ကြောမှာပစ်စညျးအိတျအလေးကွီးသယျပွီး တကိုယျတျောစှနျ့စားခနျးဖှငျ့ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခရီးလမျးတဈလြှောကျတှကွေုံ့ရတာတှေ တဈယောကျတညျးသှားလာရငျး စဉျးစားမိတာတှေ..တတှေးမိတာတှနေောကျမှာ…ခရီးလညျးဆုံးရော သူ့အတှကျအရာရာပွောငျးလဲသှားတာပဲဖွဈပါတယျ။True story-based ဇာတျကားကောငျးလညျးဖွဈတာနဲ့ အညီ ကိုယျတိုငျဝငျရောကျခံစားမိစမှောပါ။
2014 ကတည်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Wild ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဟာ American Biographical Adventure Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၂၀၁၂တုန်းက Cheryl Strayed ရေးသားခဲ့တဲ့ Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail(PCT) ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားထဲမှာ Cheryl နဲ့ Bobbi အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Reese Witherspoon နဲ့ Laura Dern တို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာလည်းအော်စကာဆုအတွက် Best Actress နဲ့ Best Supporting Actress အဖြစ်စကာတင်အရွေးခံခဲ့ရပြီး အခြားသောဆုတွေမှာလည်း စကာတင်အရွေးခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Rating တွေအနေနဲ့လည်း Rotten Tomatos မှာ 89%….IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဘဝမှာအချစ်ရဆုံးအတွယ်တာရဆုံး မိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးနောက်ပူဆွေးသောကတွေရောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်အောင်ပျက်ဆီးသွားပြီကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးကိုပါဖျက်ဆီးမိခဲ့တဲ့ Cheryl Strayed ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ….
ကိုယ်လမ်းမှားရောက်နေတာကိုသတိထားမိပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ထူထောင်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပြန်စုစည်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအရှည်လျားဆုံးခရီးကြမ်းရှည် မိုင်ပေါင်း၂၆၅၀အထိရှိတဲ့လမ်းကြမ်းကို လမ်းလျှောက်ခရီးနှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
အရင်က ဘာ Hiking အတွေ့အကြုံမှလည်းမရှိတဲ့ Cheryl တစ်ယောက်…ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ကျောမှာပစ္စည်းအိတ်အလေးကြီးသယ်ပြီး တကိုယ်တော်စွန့်စားခန်းဖွင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ကြုံရတာတွေ တစ်ယောက်တည်းသွားလာရင်း စဉ်းစားမိတာတွေ..တေတွးမိတာတွေနောက်မှာ…ခရီးလည်းဆုံးရော သူ့အတွက်အရာရာပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။True story-based ဇာတ်ကားကောင်းလည်းဖြစ်တာနဲ့ အညီ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားမိစေမှာပါ။